Fanararaotam-pahefana sy fanodinkodinam-bola :: Voasazy handoa onitra sy higadra telo taona ny sefo Cisco iray teo aloha • AoRaha
Fanararaotam-pahefana sy fanodinkodinam-bola Voasazy handoa onitra sy higadra telo taona ny sefo Cisco iray teo aloha
Nandritra ny raharaham-pitsarana andiany faharoa natao teny amin’ny Fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly (PAC) 67Ha, afak’omaly, no nitsarana ny sefo Cisco teto Antananarivo renivohitra, tamin’ny taona 2014 ka hatramin’ny taona 2016, sady Talen’ny kabinetra ao amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra (Cua).
Fanamparam-pahefana ivelan’ny asa sy fanodinkodinana volam-panjakana sy fitaovam-pianarana natokana ho an’ny Epp teto Antananarivo, mitentina dimy amby fitopolo tapitrisa ariary no vesatra niampangana ka nanasazian’ny Fitsarana azy higadra telo taona an-tranomaizina miampy fandoavana lamandy efatra amby roapolo tapitrisa ariary, ary onitra dimy hetsy sy roapolo tapitrisa ariary.
“Naharitra hatramin’ny misasak’alina ny raharaha satria navela niresaka avokoa ireo vavolombelona rehetra, na ireo niaro na ireo niampanga an’ilay sefo Cisco”, hoy ny fanazavana avy any amin-dRazafindrakoto Solofohery, lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny PAC.
“Tamin’ny taona 2016 no nitranga io fanodinkodinam-bola teo amin’ny sehatry ny fampianarana io. Tamin’ny volana febroary 2019 lasa teo, no nampitain’ny Birao mahaleo tena misahana ny kolikoly (Bianco) tety amin’ny PAC ny raharaha rehefa avy nahangonana porofo marim-pototra”, hoy ihany izy.
25 hafa voampanga
Nanomboka tamin’ny alatsinainy 16 septambra ka hatramin’ny omaly ny tapany voalohany amin’ny raharaham-pitsarana andiany faharoa atao eny amin’ny PAC 67 Ha. Amin’ny alatsinainy 23 septambra ka hatramin’ny zoma 27 septambra indray no hisokatra ny tapany faharoa. Raharaham-pitsarana momba ny fampihorohoroana, fanodinkodinana volam-panjakana, fanararaotam-pahefana, ary fivarotana zava-mahadomelina miisa valo no vita tamin’ity herinandro ity.
Hisy raharaha sivy hafa hiakatra amin’ny herinandro ambony. Dimy amby telopolo no isan’ireo olona voampanga rehetra amin’ity raharaham-pitsarana andiany faharoa ity. Olona valo amin’izy ireo hatreto no namoahana didy fanasaziana.
Baolina kitra :: Mety haka mpanazatra hanampy azy eto an-toerana i Nicolas Dupuis
Famokarana angovo :: Misy ny tetika sy paika hoentina hiarovana ny ala